Abaholi bohlelo, uSolwazi Michelle Gordon (UKZN) noDkt Njabulo Gumede wase-MUT.
Ukubambisana Kuzodlondlobalisa Amandla Okucwaninga e-KZN
Umsebenzi wokubambisana phakathi kwe-United Kingdom (e-UK) neNingizimu Afrika uhlomule ngokuxhaswa ngezigidi zamarandi ezinhlanu, uxhaswa yi-Newton Fund ye-British Council.
Lo mkhankaso uzokwenza ukuthi kube nokuqeqeshelwa izifundo ze-mastazi neze-onazi ezisezingeni lomhlaba ngokubambisana phakathi kwe-UKZN, i-Mangosuthu University of Technology (i-MUT) ne-Africa Health Research Institute (i-AHRI) eNingizimu Afrika, ne-University College London (UCL) e-UK.
Uhlelo lwezentuthuko lukazwelonke, i-National Development Plan (i-NDP), ihlongoza ukuthi isibalo sangonyaka sezitshudeni ezigogoda ngeziqu zobudokotela emikhakheni ehlukene, ngonyaka wezi-2010 ebesiyi-1 421, sikhuphuke sifinyelele ezi-5 000 ngowezi-2030. Leli khwelo lisho ukuthi kufanele kwande abafundisi basezikhungweni zemfundo ephakeme babeneziqu zobudokotela kanti kuhloswe ukuthi lesi sibalo sikhuphuke ngamaphesenti angama-75 ngowezi-2030.
Umsebenzi we-UKZN/MUT/UCL – i-StEP uhlose ukulekelela abasebenzi abafundisayo ukuthi babe ngabaholi emikhakheni yabo abakwazi ukwenza ucwaningo olusezingeni eliphezulu, bakwazi ukuqhudelana ezingeni lomhlaba nolwazi lokululeka izitshudeni ezicwaningayo ngokusezingeni eliphezulu. Lo msebenzi ngeke ugcine ngokucija izifundiswa kepha futhi uzokwakha ososayensi bangomuso baseNingizimu Afrika nase-Afrika abasezingeni eliphezulu.
Lolu xhaso luzoqale lulekelele abasebenzi abayishumi base-MUT nabase-UKZN abasemikhakheni yokwelashwa kwezifo, ezeMpilo zomPhakathi, iKhemistri, ukuTholakala kweMithi yokweLapha nezaseKhemisi ukuthi babhalisele iziqu zobudokotela neze-masitazi. Bazobhaliswa e-UKZN, ezobambisana ne-AHRI ezohlinzeka ngengqalasizinda emsebenzini wocwaninga. I-UCL izokweseka ukucijwa kwezitshudeni ezenza ucwaningo nasekucijeni abasebasha ekubhekeni ucwaningo ngaphambi kokuthi luye kubahloli.
INyuvesi izokweseka izitshudeni eLandani ngezikhathi zokuqeqeshwa ezizohambisana nezidingo zesitshudeni ngasinye, kuye ngohlobo lomsebenzi waso. I-UCL izohlinzeka ngokuchwepheshe obudingekayo njengemifanekiso esezingeni eliphezulu nokuxilongwa kweminingwane. Inhloso enkulu kuzoba wukudlondlobalisa ikhono lokucwaninga nokubheka ucwaningo ngokuvashela e-UCL kwizitshudeni zase-UKZN nase-MUT nababheka umsebenzi wazo ngaphambi kokuthi uye kubahloli.
‘Sithakasile ngokuthola lo mfundaze,’ kusho umholi walo msebenzi uSolwazi Michelle Gordon wase-UKZN. ‘Inhloso enkulu wukukhiqiza abacwaningi abakwazi ukuxazulula izinselelo zezempilo ezweni lethu nasemhlabeni.’
Izicelo zizovulwa mhla woku-1 kuNdasa ngowezi-2020, kanti kukhuthazwa abafundisi base-UKZN nabase-MUT abanesifiso sokwenza izifundo ze-masitazi nezobudokotela, noma labo asebevele bebhalisile ukuthi bafake izicelo.
Amagama: ngu-MaryAnn Francis no-Hannah Keal
Isitshudeni SeMastazi Sithole Owokuphatha Umsebenzi
Ithimba lase-UKZN Licoshe Ulwazi Olumqoka e-British Library
Owase-UKZN Wethule Ucwaningo e-Tokyo